Uyilo lwonyusa itrafikhi 25%
Lwesine, ngoFebruwari 10, 2011 NgoMgqibelo, Oktobha 29, 2011 Douglas Karr
Asikabi nayo Martech Zone ngqo ngendlela esingathanda ngayo, kodwa uyilo olutsha lube yimpumelelo enkulu. Ukugcwala kule ndawo kunayo inyuke ngaphezulu kwama-25% kunye Ukujonga iphepha ngaphezulu kwama-30%. Oko akubandakanyi ukugcwala kwabantu okongezelelekileyo esijamelana nako kwincwadana yethu entsha (rhuma ngentla).
Uyilo luhlala lujongelwa phantsi njengendlela yokwenza yandisa ukugcwala kwabantu kwindawo yakho. Abantu abangazukuchitha mali kuyilo olukhulu bahlala bephikisana nam malunga notyalo mali kuyilo lobuchwephesha. Akunjalo.
Uyilo olukhulu lutyalomali olukhulu kwinkampani yakho. Umhlobo wethu, uCarla Dawson (Uyilo lweenja ezi-4), Uyile le iteration yebhlog. Ndicele into ecocekileyo ngokupheleleyo ebandakanya ilogo. Senze uhlengahlengiso oluncinci ukusukela oko sasungula, kodwa ucoceko olucocekileyo, olucacileyo luyilo kanye ebesilandela lona.
Sikwafaka I-thumbnail yePosti yeWordPress Kwithemplate yethu yokubloga kwaye yongezwa iplagi ukuvelisa ngokuzenzekelayo i-thumbnail yeposi ukusuka kumfanekiso wokuqala kwiposti yebhlog. Ngale ndlela bekungafuneki ukuba ndiqeqeshe zonke iibhlog zendlela yokusebenzisa inqaku.
Kananjalo, umxholo ubandakanya iintengiso ezinamandla ezisekwe kudidi lwezithuba zebhlog okanye ezona zigaba ziphambili. Ukuba awukabakhangeli okwangoku, unokubona nganye yeendidi zethu eziphambili kuhambo oluphambili: Uhlalutyo, kubloga, email Marketing, UkuThengiswa kweSelula, Yoshishino LwezoKhenketho, Social Media Marketing kwaye Technology.
Emva kokuba singazange sibe nomxhasi osemthethweni ngaphambili, sele sivale inkxaso-mali emi-2 nayo! I-Emailium ixhasa iiposti zethu zeNtengiso ye-imeyile kwaye GetApp ixhasa iiposti zethu zeTekhnoloji! Umbulelo okhethekileyo uya ku iSocket ngenkqubo yolawulo lwentengiso emnandi.
Sukujongela phantsi utyalomali kuyilo olutsha. Ndingathanda ukukuxelela ukuba konke malunga nomxholo-kodwa inyani yindlela umxholo owenziwe ngayo kwaye uboniswe phantse ubaluleke.
I-SEO ayimi kwindawo yakho
Feb 11, 2011 ngo-2: 42 AM
Ibali eliyimpumelelo enkulu! Ndiyayithanda uyilo olutsha ngendlela.
Feb 11, 2011 ngo-2: 43 AM
Enkosi Brandon! Okungakumbi endleleni!
Feb 19, 2011 ngo-4: 12 PM
Ndisaqhubeka nokujonga inkangeleko entsha, kuba bendonwabile apho bezikhona izinto. Kodwa ekubeni, iipesenti ezingama-75 zeendwendwe zihlala zintsha, kubaluleke ngakumbi ukuba iindwendwe ezintsha zinjengesiza, kwaye ngokusekwe kumanani akho ngokucacileyo!
Sithetha nje sisebenza ekuyileni ngokutsha indawo yethu: http://www.roundpeg.biz kwaye siza kujonga ngakumbi kwiinguqu zakho ukubona ukuba yintoni esinokuyifunda kuwe.